Distrikan’i Ankazoabo: raisina 200 ariary monja ny kilaon’ny tongolo | NewsMada
Distrikan’i Ankazoabo: raisina 200 ariary monja ny kilaon’ny tongolo
Velon-taraina ny mpamboly any Ankazoabo amin’izao fotoana izao. Ratsy dia ratsy ny vidin’ny tongolo vokarin’izy ireo, 200 Ar monja ny hakan’ireo mpanangom-bokatra azy any an-toerana. Ny any amin’ny faritra Atsimo andrefana anefa, mamokatra tongolo 7000 t isan-taona, mpamokatra be indrindra ny any Ankazoabo. Tsara marihina fa manondrana vokatra tongolo ny avy eto an-toerana, saingy 3000 t raha be indrindra. Tany amin’ny dimy taona lasa, efa nitaky karazana kalitao tsara tamin’ireo mpamboly ny mpandraharaha, misy aza amin’izy ireo mampiasa vola miaraka amin’ny mpamboly.
Tato anatin’ny roa taona farany, tsy mahita fiaraha-miasa matotra intsony ireo mpamboly, na koa tsy mazoto firy intsony izy ireo. Ny antony, ratsy loatra ny lalana mankany Ankazoabo, avaratr’i Toliara, 258 km. Telo andro, efatra andro rehefa ho avy izao ny fotoam-pahavaratra. Mirongatra ihany koa ny asan-dahalo any amin’io distrika io amin’ny fotoam-pahavaratra. Izany rehetra izany, mampihemotra ny mpanangom-bokatra ho tonga any an-toerana.
Nohatsaraina io voly tongolo io, any amin’ny faritra Atsimo andrefana sy Sofia. Nikarakara izany teo aloha ny minisiteran’ny Varotra, nanome masomboly sy fitaovana, nampiofana ny mpamboly. Ny olana anefa, mandeha ila ny fanampiana, tsy misy firindràna ny asan’ny minisiteran’ny Varotra tamin’izany fotoana izany sy ny minisiteran’ny Asa vaventy. Mbola hita soritra izany ankehitriny, raha ny faharatsian-dalana, tsy afahan’ny kaominina maro mamoaka ny vokatra any aminy.